I Russian Federation amumethe zokungcebeleka eziyingqayizivele. Omunye wabo - Federal District, esemgwaqweni emithambekeni eCaucasus ku Karachay-Cherkess Republic. Lokhu resort wezempilo idume hhayi kuphela crystal yayo ecacile emoyeni nokumbiwa iziphethu, kodwa futhi emangalisa izikhumbuzo yemvelo kanye mbukwane. Teberda ihlanganisa izindawo ezintathu: ephansi kanye engenhla Teberda futhi ngokushesha iphendukele edolobheni.
idolobha Federal District
Emizaneni eCaucasus njalo ezikhanga abahambi ngezandla ezifudumele sezulu esipholile, umoya ohlanzekile futhi elinamanzi nature enhle, komunye waleyo mizi ezikhangayo - Federal District. IziNdawo, ezidumile emhlabeni wonke, - iziphethu zalo zokwelapha, isimo sezulu eliyingqayizivele futhi wasentabeni. Ngo Teberda eyakhelwe eziningi ukuzijabulisa impilo izikhungo, okuyinto kokuba abantu baphathwa izifo zokuphefumula ngayo.
Lokhu edolobheni resort kungumongo Manor Teberda Reserve, ngesisekelo okuyinto Museum and zoo umsebenzi. Indawo egcina amagugu esizwe iziqondiso ngeke kuphela zona izivakashi nge esiqiwini imvelo, kodwa futhi izindaba zabo ezithakazelisayo netindzaba ukusiza bathande ngempela kuye. I zoo wehlukile ifomethi evamile kuzo zonke - yezinyoni Ibhere elinsundu kuphela ehlezi kanye nazo zonke izakhamuzi zakhona zihlala ebiyelwe off izimfunda kanye emagqumeni esiqiwini.
Ayikho ezithakazelisayo kancane uhambo epulazini trout etholakala edolobhaneni Upper Federal District. Lapha ezifuywa izinhlobo ezimbili zezintuthwane trout kanye nezinye izinhlobo ezimbalwa. Izivakashi ukujabulela ezihlukahlukene izinhlanzi izitsha, okulungiselelwe labapheki abanolwazi Caucasian phambi izivakashi.
City Federal District liyithuluzi eliyinhloko kwabaningi izintaba ukuthi abadlula izindawo edume kakhulu futhi enhle ocebile Karachaevo-Cherkessia.
Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona Teberda ezikhangayo zazo echazwe ngenhla, etholakala esiqiwini efanayo uHlu Jikelele Lwamakheli. Egcwele umoya ohlanzekile, ambozwe selangeni lwangena yi nokububula of imifula nemifudlana, anakho njalo, unyaka nonyaka edonsela abahambi abanazo. Ensimini ka esiqiwini entabeni ikhula ngaphezu 1,200 zezitshalo semithambo, mayelana 500 zama-amakhowe, mayelana 750 zama-wona kanye ulele futhi abangaba ngu-100 zama-ulwelwe eliwumhlaba. I izimfunda kanye emagqumeni esiqiwini egijima ezungeza 45 zezilwane ezincelisayo, izinhlobo zishayeka esibhakabhakeni, ezingaphezu kuka-220 zezinyoni, futhi imifula kanye namachibi ukubhukuda izinhlanzi eziningi, ezihuquzelayo nezilwane eziphila ezweni.
Esinye sezici ezivelele esemqoka ye Teberda Reserve kukhona amachibi eziningi, eziningi zazo zitholakala endaweni engamamitha amamitha angaphezu kuka-2,000 ngaphezu kogu lolwandle. Badukskie echibini - amadamu edume kakhulu futhi enhle engokwemvelo esifundeni. Thanda amachibi iningi Karachay-Cherkessia zingabantu phakathi 200 futhi 1,000 ubudala futhi babe ngenxa ukuncibilika izinguzunga zeqhwa. Kusukela iziqongo snowy umkhuphuka emaceleni ale ntaba ligeleza Imifula eminingi, ukwakha Rapids omkhulu nezimpophoma anamandla.
Abathandi ezikhangayo emlandweni futhi yokwakha kuyobenza Sentinsky uhambo complex emlandweni futhi yokwakha, okubandakanya ukwakhiwa kwethempeli esigodlweni. isonto Senty, eyakhiwa ngekhulu 10 yi Alans, - omunye omdala e WaseRussia.
Lesi sakhiwo yezakhiwo iseningizimu ezintabeni ngenhla edolobhaneni Lower Teberda, ezikhangayo kahle walondoloza kuze kube sesikhathini sethu, naphezu ezingaphezu kuka yobudala bakhe ehloniphekayo. Ithempeli lakhiwa isitayela bokwakha cross-oluyingungu limestone esizeni ithempeli lamaqaba lakudala, ukuphakama kwalo imayelana 10 metres, ezindongeni izinsalela walondoloza kahle ka nemidwebo zangekhulu le-11. Eceleni ithempeli 19 insikazi kwekhulu lakhiwa sezindela Orthodox, okuyinto, ngeshwa, yabhujiswa phakathi nenkathi yamaSoviet. Kamuva, izindela we sezindela kanye kabusha ithempeli, kancane ehlanekezelwe kweqiniso ukuze ifomu yayo yasekuqaleni.
ethempelini Shoansky - lena ngenye shrine Christian ezibangelwa Karachay-Cherkessia ezintabeni yabo. Yakhiwa ngekhulu 10th isiko eByzantium, uye waqhubeka phezu kwezingange zawo yimibhalo eminingi eqoshwe ema ka nangenkathi ezahlukene ngesiRashiya, Armenia, isiGeorgia, Arabhu, isi-Greek, izinsalela umdwebo omuhle zokuhlobisa, TAMGAS ejwayelekile enyakatho abantu Caucasian. Ngeshwa, iningi lalezi artefacts behlele kithi phakathi namakhulu eminyaka, ngokushesha inganyamalala phakade, ngigezwe ezindongeni.
Makalale Teberda kusikisela uhamba ezikhangayo zemvelo emhlabeni resort. Omunye ethandwa kakhulu izivakashi izindawo kuba uhambo oluya Dzhamagatskomu seltzer - imithombo yamanzi amtoti elise esigodini Goral-Kol emfuleni. Ukuze amandla lapho izindlela ezimbili, kodwa amaqembu amaningi ukuvakasha zisebenzisa lowo egobhoza umzila emhosheni zangaphambili esigodini jamagat emfuleni.
Umzila uhambo elula, itholakala ngokuphelele wonke umuntu. Ukuhamba okudliwa emasimini nasemahlathini kuyinto kuyakhathaza kakhulu, egcwele birdsong kanye nokububula komfula, ilanga efudumele futhi ukukhala emoyeni. shades ezahlukene izigodi oluhlaza futhi izihlahla, imibala egqamile izimbali kanye amajikijolo, ziklabe amahhashi futhi izinkomo, umqhele ezintabeni emkhathizwe kanti isibhakabhaka ecacile okusezingeni eliphezulu ukudala umqondo imidwebo ngiyaphupha dreamlike, lapho abahambi zathunyelwa ngephutha edabula i umgubuzelo ezingabonakali phakathi imihlaba.
I iziphethu ezibekwe ezingeni ukuphakama 1813 amamitha ngaphezu kolwandle. Amanzi asivumelani kancane aligugu amanengi, ecacile, kancane elikhazimulayo futhi esihlwabusayo kakhulu. Ekuphulukiseni yayo kanye nezimpahla ekuvuseleleni ezinganekwaneni.
River kanye waterfall Shumka
Ukuze omunye ezithakazelisayo umzila yokuqalisa kuyinto eSifundeni Federal. Zomhlaba Legends ivulekele abahambi, izintaba ukuze waterfall Shumka.
ayehamba umzila sihamba wokuqala emhlabeni ithrekhi ngesikhathi Dombai ke ngaphesheya kwebhuloho phezu komfula Shumka - ngomfula owumthelela encane Teberda falling abanomsindo phansi amatshe kwebhuloho ugijimela umzila ngomfula phakathi ihlathi okuxubile ekhulwini ubudala fir eyingqopha-beech. Ngezinye ogwini olunamadwala kumelwe iya ebhange kwesokudla Shumka, lapha uqala umqansa emaweni. Umgwaqo kudinga ukunakwa nokunakekela, ngoba endleleni kukhona ezinkulu ezinkulu. Ilungelo ezinkulu kuyinto eweni emaweni of Love, lapho kukhona legend kabi futhi enhle, ositshela ngendaba ebuhlungu abantu ababili abanothando. Yingakho impophoma alikubonanga, kodwa wezwa umsindo, ukukhula nge zonke imitha. Futhi ngaphambi amehlo bencoma lezihambi kuvula Shumka impophoma. Ukusakaza Inamandla amanzi kuwa Ukusuka onqenqemeni itshe, futhi ngezwi elikhulu, ezwakalayo kulo County, ewa imitha-12 ukuphakama. Ngaphezu kwalokho ayikho indlela - ke usike amawa cishe mpo, embozwe ulele futhi moss. Lapho ungakwazi nje ahlale by waterfall, ukuhogela inkungu, ifu likhuphuka ngaphezu sesifufula, futhi batshala ubunjalo intombi we umhosha, kubutsela amandla bahlehlise.
Abalandeli ukugibela phezu zokushushuluza eqhweni ungaya e Dombay, okuyinto 20 ukusuka edolobheni ngaphansi kwegama Federal District. Kanjani ukuze baye khona? I esheshayo elula - hhayi itekisi, kodwa ungathola ebhasini. Naphezu ezinye amaphutha (emigqeni ngamakheshi kanye nenani elincane imizila) Dombay kubhekwe iparele eCaucasus. kwenkundla langa bantu abanomusa nabathanda futhi umkhathi ezolile futhi induduzo njalo ukuheha izivakashi eziningi resort.
Mining and Teberda amahle! Izikhangibavakashi yalesi sifunda emangalisayo, adalwe imvelo emakhulwini amaningi eminyaka futhi zeminyaka, amandla abatelekile kanye nobukhazikhazi. Umoya ohlanzekile, ephulukisa iziphethu, iphakama iqhwa-eneziqongo nesigodi ukuqhakaza - izingxenye njalo iholidi esiphelele kulesi sici resort odumile we eCaucasus.
San Diego, CA: Izikhangibavakashi nezithombe
"Ezinganele system imithombo khona ukuqedela operation": kusho ukuthini?
EPeterhof onguthelawayeka. Umlando Nezanamuhla
Alpheus Metropolitan uHilarion: hierarch ka Lobu-Orthodox LaseRussia